Salady tongolo kôkômbra - Fomba Fanamboarana
inona ny mahasamihafa ny tsaramaso navy sy ny tsaramaso avaratra lehibe
inona no azoko soloina ny zava-manitra adobo
voatsoaka voatavo voatavo amin'ny fryer
aiza no hividianana salady voankazo vaovao
Salady tongolo kôkômbra
Salady tongolo kôkômbra dia manamboatra fiovana ankasitrahana avy amin'ny salady ranomandry mahazatra natsipy. Amin'ny barbecue manaraka anao dia ho tian'ny mpitsidika anao ity salady mamy ity miaraka amin'ny matsiro tratra akoho voatono ary lafiny iray amin'ny Mofo vita amin'ny tongolo gasy !
Ny kôkômbra vaovao marihitra dia atsipy amin'ny tongolo mamy sy aneta vaovao ho an'ny tian'ny fahavaratra mora sy malefaka ary mamelombelona.
Salady tongolo kôkômbra mora
Raha mbola tadidiko dia nanompo izahay salady kôkômbra mamy amin'ny fivoriana sy fiaraha-mivory. Tahaka ny itiavako ilay kinova fanosotra, tianay ny mitafy fomba tart vinaigrette mamy amin'ity recette ity! Azonao atao ny manamboatra azy io amin'ny fotoana fohy avy amin'ny akora tsotra vitsivitsy, ao anatin'izany ny kôkômbra vita amin'ny anglisy, tongolo mamy, vinaingitra, aneta vaovao ary zava-manitra.
Akora ilaina amin'ny salady tongolo kôkômbra
Ny cukes rehetra dia hanao ny tetika, fa raha te hahita vokatra tsara indrindra dia ampiasao kôkômbra anglisy (fantatra koa amin'ny hoe kôkômbra tsy misy voa, na kôkômbra eoropeanina). Lava sy mahia kokoa ireo noho ny salady na kôkômbra alim-bolo, ary matetika dia mifono fatratra ao anaty plastika. Ny kôkômbra anglisy koa dia manana hoditra manify sy tsiro mamy kokoa avy eo kôkômbra salady, ary kely kokoa ny masomboly.
Raha mampiasa kôkômbra salady mahazatra ianao dia maniry ny hanala ny rehetra na ny ankamaroan'ny voanjo sy masomboly, satria toa mangidy sy somary henjana ireo. Betsaka ny olona no tsy mankasitraka ny savony savoka izay ampiasaina amin'ny kôkômbra fivarotana mba hitazomana ny vokatra ho lava kokoa. Te-peel ianao hanesorana an'io firakotra io, na azonao atao ny manandrana manondraka ny kôkômbra amin'ny vinaingitra mandritra ny minitra maromaro ary mamafa ny faritra amboniny.
Safidy tsara ny vinaingam-bary, somary mamy izy ary tsy dia madinidinika kokoa noho ny vinaingitra fotsy na cider, ary tsy hanadio ny kôkômbra na tongolo.
Ny vinaingitra cider dia safidy tsara ary manampy tsiro sy tang hafa fanampiny.
White Balsamic koa dia fomba iray hanamafisana ny fahasarotan'ireo tsiro. Mifanaraka tsara amin'ny voatabia izy ka aza misalasala manipy vitsivitsy alohan'ny hanompoana azy ary manao azy ho salady voatabia kôkômbra.
Salady tongolo kôkômbra tsiroaroa tsara miaraka amin'ny hena masiaka, toy ny akoho marinina na koho zanak'ondry na koa Curry akoho .
Manamboatra salady tongolo kôkômbra
Ny salady kôkômbra dia miaraka mora foana. Ny vilia salady sy ny tabilao fanaparitahana fotsiny no ilainao.
Prep: Sasao na tapatapaka ny kôkômbra ary atsaharo manify ny tongolo mamy.
Akanjo: Atambatra anaty lovia fangaro lehibe ny akora rehetra ary afangaro mandra-pahafatin'ny siramamy.
Marinina: Arotsaka ilay kôkômbra voadidy na namboarina ary tongolo mamy voadidy ary atsipazo ao anaty palitao. Marino mandritra ny ora vitsivitsy alohan'ny hanompoana.
Raha vao namboarina fonony dia hampangatsiaka mandritra ny adiny iray na mahery. Alefao tsara ity salady ity!
Salady kôkômbra dia azo atao mialoha ary hitandrina tsara mandritra ny roa andro. Izy ireo dia tsara toy ny topper ho an'ny burger na lovia ho an'ny pie akoho . Ny fotoana manaraka ilainao mila lovia tsotra manadio ny lanilany, safidy salady kôkômbra dia safidy mora.
Tiana kôkômbra maro kokoa
Salady kôkômbra mamy - Creamy kilasika.
Sandwiches amin'ny kôkômbra - Fomba fisakafoanana antoandro tonga lafatra!
Salady voatabia voatavo mamy - Ankafizin'ny fahavaratra!
Cucumber Bruschetta - Fihodinana vaovao amin'ny mahazatra.
Greek Tzatziki - Fantsom-boanjo kôkômba avy amin'ny yogourt tonga lafatra amin'ny fihinanan-tsakafo na ny fisotroana Akoho voatono
Salady kôkômbra - miaraka amin'i Lemon Vinaigrette
Salady masaky voanio voatavo - Lafiny na tena mahaliana sy mahafinaritra!
Fotoana fanomananaroa-polo amby minitra Fotoana manontoloroa-polo amby minitra Fanompoana4 servings MpanoratraHolly Nilsson Ity salady matsiro ity dia ho voadona amin'ny sakafon'ny fisakafoanao manaraka! Afangaro ireo tsiro vaovao sy mangatsiaka ireo ho an'ny tsiranoka salady fahavaratra. pirinty Pin
▢rOA kôkômbra lava anglisy
▢½ tongolo fotsy mamy
▢⅓ kapoaka vinaingitra fotsy na vinaingitra cider
▢rOA tablespoons menaka legioma na menaka oliva maivana
▢rOA sotrokely siramamy
▢rOA tablespoons aneta vaovao
▢sira sy dipoavatra mba hanandrana
Sasao kôkômbra sy hodioka raha tiana. Kôkômbra sy tongolo manify.
Afangaro ny vinaingitra, menaka legioma, rano ary siramamy. Atambaro ny fangaro amin'ny kôkômbra ary hangatsiaka farafaharatsiny adiny 1 na hatramin'ny 4 ora. (Aforohy na atsipazo im-betsaka mandritra ny fanamasinana).
Atao anaty lovia ary atsipazo amin'ny dill, sira ary dipoavatra hanandrana.
Kaloria:130,Karbohidraty:8h,Proteinina:1h,Tavy:10h,Tavy mahavoky:8h,Sodium:4levitra,Potasioma:240levitra,Sugar:5h,Vitamina A:175IU,Vitamina C:5.2levitra,Kalsioma:27levitra,Vy:0.4levitra
Teny lakilesalady kôkômbra Mazava ho azySalady, sakafon-tsakafo masakaMalagasy© SpendWithPennies.com. Voaaron'ny zon'ny mpamorona ny atiny sy ny sary. Ny fizarana an'ity fomba fahandro ity dia sady amporisihina no ankasitrahana. Voarara tanteraka ny maka tahaka sy / na mametaka ny fomba fahandro feno amin'ny media sosialy. Azafady mba jereo eto ny politikako momba ny fampiasana sary .
Avereno ity Salady Mora ity